YEYINTNGE(ကနဒေါ): Tuesday, June 22
22 June 2010 ဒိုင်ယာရီ
22 June 2010 yeyintnge Diary.doc file get here
22 June 2010 Yeyintnge Diary
BY YeYint Nge ... 6/22/20100comment
G20 Toronto ပထမနေ့မြင်ကွင်း
ဒီနေ့မှာတော့Eaton CentreနားကEsso gas station ကိုလည်းစီးနင်းထားခဲ့ကြပါတယ်..
"a police state,apolice state, rise up, rebel, before it's too late. လို့သီချင်းလုပ်ဆိုကြပါတယ်..
"Stop the war, arm the poor, make the rich pay."
"Who steals the wealth we create?" လို့လည်းအော်ဟစ်ကြပါတယ်..
အစည်းအဝေးလုပ်မဲ့ Metro Convention Centre တ၀ိုက်ရဲ၅၁၀၀အစောင့်ချထားပါတယ်..
ဒီလှုပ်ရှားမှုကို Ontario Coalition Against Poverty , the Kingston Coalition Against Poverty နဲ့
University of Guelph students , တို့ကဦးဆောင်နေတာပါ။
Huntsville, Ont., Deerhurst Resort မှာလည်း G8 summit လုပ်မှာမို့လို့အဲဒီဧရိယာကိုလည်း
နအဖစစ်သံရုံးဝန်ထမ်းတဦး၏ ရိုင်းပြသောအပြုအမူအား ရှုတ်ချကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
- နိုင်ငံတကာမြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ဖောင်ဒေးရှင်း ( IFBNC )၏ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၆၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ဆုတောင်းသ၀ဏ်လွှာနှင့် နအဖစစ်သံရုံးဝန်ထမ်းတဦး၏ ရိုင်းပြသောအပြုအမူအား ရှုတ်ချကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ..
IFBNC's DASSK (65) Birthday Statement
လွပ်လပ်တဲ့ မြန်မာပြည်သို့ ပျံတဲ့ငှက်
နွေးထွေးမူများ ရှိခဲ့ဖူးပါရဲ့  ။။။။။။။။
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့  ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ဖူးပါရဲ့  ။။။။။။။။။
ကျမရဲ့  မိတ်ဆွေတွေ
ရွှင်ပြမူတွေ ရှိနေခဲ့ဖူးပါရဲ့  ။။။။။။။။။။။။
လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ နေခဲ့ဖူးပြီမို့ ။။။။။။။။။
ပျံသာပျံပါ နေပါ့လေ ။။။။။။။။။။။။။
FREE BIRD TOWARDS A FREE BURMA BY DAW AUNG SAN SUU KYI ကဗျာကို ခံစားသီကုံးခဲ့ပြီးနောက် ဂုဏ်ပြုလွမ်းဆွတ်ရင်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နအဖစစ်သံရုံးဝန်ထမ်းတဦး၏ ရိုင်းပြသောအပြုအမူအား ရှုတ...